musha More Public Figures Bio Ngozi Okonjo-Iweala Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
Yedu Ngozi Okonjo-Iweala Biography inokuudza Chokwadi nezveNyaya yake Yehudiki, Hupenyu hwepakutanga, Mhuri, Vabereki - Kamene Okonjo (Amai), Chukwuka Okonjo (Baba), Murume (Dr Ikemba Iweala), Hupenyu Hwega, Mararamiro uye Net Worth.
Zvichitaurwa zviri nyore, isu tinokupa iwe nenyaya yehupenyu hwehupfumi, kubva pamazuva ake ekutanga, kusvika paakatanga kuve nemukurumbira.
To whet your biography hamu, heuno hudiki hwake kune yevakuru gallery - pfupiso yakakwana yeNgozi Okonjo-Iweala Bio.
Ngozi Okonjo-Iweala Biography - Tarisai Mazuva Ehuduku hwake kusvika panguva yeMukurumbira.
Hongu, tese tinozviziva izvozvo akanzi Director-General weWorld Trade Organisation (WTO) muna 2021.
Nekudaro, vashoma vevateveri vake vanoziva nezve Ngozi Okonjo-Iweala's Biography, iyo inonakidza kwazvo. Pasina ado yakawanda, ngatitangei.
Ngozi Okonjo-Iweala Wehucheche Nyaya:
Kutanga kuenda, iye ane zita remadunhurirwa rekuti "Okonjo-Wahala". Ngozi Okonjo-Iweala akaberekwa pazuva re13th raJune 1954 kuna amai vake, Prof. Kamene Okonjo nababa, Prof. Chukwuka Okonjo muOgwashi-Ukwu, Delta State, Nigeria.
Akauya pano pasi sedangwe pavana vana vakazvarwa mumubatanidzwa pakati pevabereki vake vanoratidzwa pazasi.
Sangana nevabereki vaNgozi; Prof. Chukwuka Okonjo na Prof Prof Kamene.
Hondo yenyika yevaNigeria isati yatanga, iyo yakatanga muna 1967, Ngozi akapedza chikamu chemazuva ehudiki hwake mumusha wekumaodzanyemba nambuya vake.
Kare kumashure, vabereki vake vakaenda kunodzidza kuGerman. Pavakadzokera kuNigeria, hondo yeBiafra yakatanga. Nekudaro, madiki madiki akapedzisira aona kupokana kwakaipisisa muNigeria.
Semusikana mudiki, Ngozi aive mwana anodakadza aive nehupenyu hwakanaka hwekugara. Nesimba rake rekuda, akanunura mumwe wevanin'ina vake kubva mukuona kwekufa nekuda kwemalaria munguva yehondo.
Unoziva here?… Ngozi akafamba makiromita gumi nemunin'ina wake ari kufa kumusana kuenda kukiriniki kuchechi. Izvi zvakaitika apo baba vake vachiri kushanda semusoja muhondo, uye amai vake vairwara.
Ngozi Okonjo-Iweala Nhoroondo Yemhuri:
Nyanzvi yezvehupfumi iyi inobva kuimba yeumambo iyo yaifarira kwazvo dzidzo. Kunyatso kutaura, baba vake vaive Obi (Mambo) weOgwashi-Ukwu anobva kuObahai Royal Family.
Kutenda kumhuri yake Yemhuri, Ngozi akapinda zvimwe zvikoro zvine mukurumbira. Zvakare, aive asina matambudziko emari panguva yekurerwa kwake.
Zvinosuruvarisa, vabereki vake vakarasikirwa nezvinhu zvavo zvakawanda munguva yehondo yevagari vemo. Asi mushure memuedzo wese, vakadzokera mukubwinya kwavo kwekutanga uye vakadzorera zvese zvavakange varasikirwa.
Ngozi Okonjo-Iweala Mhuri Kubva:
Nenhanho yake yesimba mumasocial societies, vanhu vazhinji vakaramba vachinetseka kuti ndeipi chikamu chepasi. Mune feat yekupa mhinduro, timu yedu yakazoona kuti Ngozi inonakidzwa neropafadzo dzehukama hwehukama.
Sezviri pachena, iye chizvarwa cheNigeria nekuzvarwa. Kune rimwe divi, akazova mugari weUS kuburikidza ne Naturalization mu2019.
Chii chimwezve?… Kwaanobva (Ogwashi-Ukwu, Delta State) iri kumba kweJay-Jay Okocha Stadium uye Abu Ano Market kuIshekpe.
Tora tarisiro yakanaka kune yehupfumi nzvimbo yeKutanga. Iye anouya kunzvimbo yemahombekombe egungwa (Delta) uko kupona kwevakanyanya kunokosha.
Ngozi Okonjo-Iweala Dzidzo:
Nekutenda, vabereki vake vakarerekera nzeve kune zvimiro zvehunhu hwevanhu munharaunda yedzidzo yevakadzi.
Nekudaro, vanoisa hwaro hwakanaka hwedzidzo kuna Ngozi nevanin'ina vake (Njide, Ifechukwude, naOnyema). Izvi zvakaita kuti vechidiki lass vanyore kuQueen's Chikoro muEnugu pazera diki.
Kuona kwekunze maonero echikoro chake chekutanga (Mambokadzi Chikoro, Enugu).
Kwechikamu chikuru chehupenyu hwake hwepakutanga, Ngozi akapinda Chikoro cheSt.Anne pamwe neInternational Chikoro muIbadan.
Paakangovhara 19 akaita mukana wekuti aenderere mberi zvidzidzo zvake zvakamuvhurira kuUS.
Achishandisa irombo isingawanzoitika, Ngozi akanyoresa kudzidza kuHarvard University. Mushure memakore matatu, akapedza kudzidza neAB mune zvehupfumi muna 1976.
Ngozi Okonjo-Iweala Biography - Hwekutanga Hwehupenyu Hupenyu:
Nekuti Ngozi aive mukadzi anoona, aisafanira kumira pakungowana dhigirii. Kune zvinyorwa, aida kuita zvakawanda.
Nekudaro, akanyoresa kuenderera mberi nezvidzidzo zvake kuMassachusetts Institute of Technology. Ikoko akawana Ph.D. yake. mune zvehupfumi matunhu nekusimudzira muna 1981.
Kunze kwerombo rakanaka, akatanga kushanda semudzidzi kuWorld Bank muWashington DC. Zvinosekesa zvakakwana, Ngozi aishingairira kunyora kunyangwe kuongororwa kwezvemari kushoma. Pasina nguva iri kure, akashanda nenzira yake mukurumbira.
Ngozi Okonjo-Iweala Bio - Mugwagwa Unoenda Mukurumbira Nhau:
Unoziva here?… Ngozi akashanda semubatsiri wezvehupfumi mubhanga renyika muWashington DC kwemakumi maviri emakore. Mushure mezvo, Aimbova Mutungamiri Olusegun Obasanjo akamugadza segurukota rezvemari muNigeria mu2003.
Ndichiri muhofisi, Ngozi akauya nechimwe chirongwa chakabatsira kuchengetedza kujeka muhurumende. Izvo hazvina kutora nguva refu asati aita kudzoka kukuru kubhanga repasirose semutevedzeri wemutungamiri wenyika muna 2007.
Ngozi Okonjo-Iweala Biography - Kubudirira Nyaya:
Kushanda nesimba, sezvavanotaura, kunowanzo gadzira kubudirira. Nenzira imwecheteyo, hunyanzvi hwaNgozi hauna kuoneka.
Muna 2011, Vaimbove Mutungamiri Goodluck Jonathan vakamugadzawo segurukota rezvemari reNigeria kechipiri. Izvi zvakamuita mukadzi wekutanga kubata chinzvimbo chakadai munyika.
Iyo 15 yaFebruary 2021 inoramba iri zuva rakakosha muNgozi's Biography yaaisazombofa akakanganwa. Ndiro zuva raakagadzwa kuve Director-General weWorld Trade Organisation.
Asati asarudzwa, akapikira kukwikwidza kupatsanurana pakati peUS neChina pakutengeserana. Vamwe vese sezvavanotaura inhoroondo.
Akange asingakwanise kuve nemufaro wake paakanzi director-general weWTO.
Ngozi Okonjo-Iweala Husband:
Kazhinji unogumburwa nenyaya inofadza yerudo yehunhu hwakasimba senge hwaimbove Gurukota reMari.
Pasina kupokana, Ngozi akaroora panguva yekunyora Biography yake. Murume wake ndiDr Ikemba Iweala. Kufanana naye, anodawo zivo zvakadzama.
Chimwe chinhu chinoshamisa nezvevakaroora ndechekuti vakadanana kubva kubva pavakave nepfuma shoma kana vasina.
Ehezve, kuremekedza kwavo kweumwe neumwe kwakamira muyedzo wenguva. Nekudaro, zvakavaita chifananidzo kune vakawanda vakaroora vechidiki mu Africa.
Pazasi pane mufananidzo unoratidza kuzvipira kwavo kusinga tsanangurike kune mumwe nemumwe, zvese munguva dzakanaka kana dzakaipa.
Shiri dzerudo dzave dziri pamwechete kubva vachiri vadiki. Unogona here kutenda shanduko yevakaroora kubva pahuswa kuenda munyasha?
Ngozi Okonjo-Iweala Vana:
Chokwadi, muchato waNgozi wakapa kuberekwa kwevana vana vanoyevedza (vatatu vakomana nemusikana).
Sekutaura kunozivikanwa, apuro haridonhe kure nemuti wemaapuro, saizvozvowo vana vake vakatora mushure mekubata kwababa vavo.
Vaviri vevanakomana vaNgozi (Uzodinma naUchechi Iweala) pamwe nemwanasikana wake mumwe chete Onyinye Iweala varapi sababa vavo.
Sasha Obama Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
Zvakare, mwanakomana wavo (Okechukwu) akatora imwe nzira. Nekudaro, akazove akapedza kudzidza kuSocial Studies.
Sangana nevana vana vaNgozi (LR); Uzodinma, Uchechi, Okechukwu naDr Onyinyechi Iweala.
Chii chinoita kuti 7th Director-General weWorld Trade Organisation akobvu? Kutanga, ane zvigadzirwa zveGemini zodiac maitiro.
Usanyanyo shamisika kana iwe ukamuona achizununguka pakati pemaawa anofadza uye mapato emabiko. Chokwadi ndechekuti, kungwara kwake hakuna kumutadzisa kubva pakuve icon yekutamba.
Zvakare, Ngozi mukadzi anotaurisa, hapana kukahadzika pamusoro pazvo. Iye zvakafanana akafunga zvakadzama. Mumisangano mizhinji panokurukurwa nyaya dzepasi rese, nyanzvi yezvehupfumi inogara ichiratidza kufara apo ichifunga nezano rakanaka.
Kunyangwe paanofunga nezvemazano, anowanzo chengeta kunyemwerera kwakanaka pachiso chake.
Ngozi Okonjo-Iweala Net Kukosha uye Lifestyle:
Chekutanga pane zvese, iye haana kupfuma senge Mike Adenuga. Nekudaro, vazhinji vakapfuma vekuNigeri havazokwanise kusvika padanho rake rekufurira.
Pamwe wanga usinga zive kuti Forbes yakamuronga se # 48 Simba Vakadzi muna 2015. Zvisinei, zita rake rakazoburitswa muna 2016.
Panguva yekunyora iyi Bio, Ngozi yakaunganidza mari inofungidzirwa yeNet Worth ye $ 5 mamirioni (2021 Stats). Ehe, iye ane dzimba zhinji uye mota.
Nekudaro, iyo imba Inoratidzwa pazasi yakanyorwa seimwe yemahombekombe ake anozivikanwa anokosha madhora 3.15 Mamiriyoni muAbuja.
Kanganwa kutaridzika kwe facade kweimba yake, ine yakanaka yemukati dhizaini.
Ngozi Okonjo-Iweala Hupenyu Hwemhuri:
Kubva chaipo pamazuva ake ehudiki, iyo economist inoona imba yake seyakanyanya sosi yekumukurudzira.
Ehezve, vabereki vake uye vanun'una vakamubatsira iye kubudirira zvakawanda muhupenyu. Nekudaro, isu tinokupa iwe zvine chokwadi nezve yega nhengo yemhuri yake.
Nezve Baba vaNgozi Okonjo-Iweala:
Hupenyu hungadai hwakave husingakwanise kurarama dai zvisiri zvekutsungirira kwababa vake uye nekushanda nesimba. Ndisati ndaenderera mberi nekuona Nhoroondo yeHupenyu hwake, Baba vaNgozi ndiProf Chukwuka Okonjo.
Iye anoita kunge akatora mushure mekuonekwa kwababa vake (Prof. Chukwuka Okonjo).
Sezvambotaurwa, aive Mambo weOgwashi-Ukwu achiri mupenyu. Prof. Chukwuka vakarera vana vavo vese nedzidzo yakakodzera.
Zvinosuruvarisa, akarasikirwa neupenyu (pamakore makumi mapfumbamwe nemapfumbamwe) nemaoko anotonhora erufu munaGunyana 91. Unoziva here?… Baba vaNgozi vakashanda saBrigadier wemauto eBiafra muhondo yevagari vemuNigeria ya2019.
Nezve Amai vaNgozi Okonjo-Iweala:
Vana amai vakuru vakabereka vana vakabudirira, uye amai vaNgozi havasi ivo vega. Anonzi Kamene Okonjo, uye ndiamai vevana vana.
Kutenda kwaari, Ngozi akadzidza maitiro ekugadzirisa matambudziko akasimba nekuvimba kwakazara.
Sangana naamai vaNgozi, Kamene Okonjo. Iye anowanzo ratidza aura yamambokadzi mukudzikama kwese uye nekuzvininipisa.
Pane imwe nguva apo Kamene akapambwa nevarume gumi vakapakata zvombo. Izvo zvese zvakaitika muna Zvita 10.
Nekudaro, iye akasunungurwa mushure memazuva mashanu mukutsinhana nerudzikunuro. Pandinonyora iyi Biography, Kamene akagadzwa kuva purofesa wezvematongerwo enyika.
Nezve Ngozi Okonjo-Iweala's Siblings:
Ehezve, iye aimbove gurukota ane vanin'ina vatatu vadiki vanobudirirawo. Unoziva here?…
Hanzvadzi yaNgozi chete (Dr Njide Okonjo-Udochi) akabuda saMhuri Chiremba Wegore 2021 muMaryland, US. Nekudaro, iye anova mukadzi wekutanga mutema kuzviita munhoroondo.
Nguva pfupi baba vavo vafa, Ifechukwude Chukuka Okonjo (hanzvadzi yake) akamutsiva saMambo. Ipo munin'ina wake wekupedzisira, Onyema Okonjo, ari iye muvambi uye CEO weGiant Beverages.
Sangana nemadzikoma nehanzvadzi yaNgozi, avo vakawanawo zvakawanda nenzira yavo. (LR); Dr Njide Okonjo-Udochi, Ifechukwude, uye Onyema Okonjo.
About Ngozi Okonjo-Iweala's Relatives:
Pane mukana wakakura wekuti mbuya nasekuru varoverawo mugomo. Ichi chingangodaro chiri chimwe chezvikonzero zvikuru zvaasingawanzo kutaura nezvazvo.
Pasina panikiro, babamunini vake, vanamainini, uye dzimwe hama dzokunyama vanofara kumuona achiita zvinhu zvikuru mumabasa ake ebasa.
Ngozi Okonjo-Iweala Chokwadi:
Kuputira Bio yake, hezvino zvishoma nezve iye izvo zvaizokubatsira iwe kuwana ruzivo rwakazara rweHupenyu Hwake Nyaya.
Wechinomwe director-general weWTO akasarudzika munzira yake yekupfeka. Iye anowanzo kumira kunze neake mafashoni. Pasina mubvunzo, iye anoonekwa mune yake yehuro mhete uye inoshamisa yakagadzirirwa Ankara inopfeka.
Moreso, maitiro ake ekunyora iye Gele (musoro tayi) akakwezva kutariswa kwevakadzi vazhinji vadiki muAfrica.
Chii chimwe?… Vamwe vevateveri vake vakatevedzera mapfekero ake paakanzi Director-General weWorld Trade Organisation (WTO) muna 2021.
Ona kuti vakanaka sei vese vachitevedzera madhirezi ake.
Fembera chii?… Ngozi ane tarenda rakakura rekunyora. Kwemakore, akaburitsa mabhuku mashanu uye zvimwe zvakawanda zvinyorwa. Zvimwe zvezvinyorwa zvake zvakaburitswa ndezvekuti; Kugadziridza izvo Zvisingachinjiki (5) uye Chinua Achebe: Mudzidzisi weChiedza (2012).
Ngozi Okonjo-Iweala Chitendero:
Kuuya kubva kunyika inonamata kwakave nemhedzisiro yakawanda pane zvinotendwa naNgozi. Ehe, iye ndomumwe wevanhu vazhinji vanoenzanisa hukama hwavo pamwe nehumwe hukama hwehupenyu hwavo. Pasina kupokana, Ngozi muKristu uye akarera vana vake pasi pemitemo yetsika yekutenda kwake.
Kusarudzwa kwaNgozi kutungamira iyo WTO kwakapotsa kukandwa mukukahadzika mushure mekunge US yapikisa danho iri. Maererano ne bbc.com, United States yakatenda kuti South Korea Yoo Myung-hee aigona kubata kutengeserana kwepasirese zvirinani kupfuura Ngozi.
Mukufamba kwake kwehupenyu, Ngozi angadai akatadza kukunda mamwe matambudziko dai asiri baba naamai vake. Ehezve, vabereki vake vakaisa hwaro hwakasimba hwedzidzo kwaari.
Nekudaro, raive basa rake rakaoma iro rakamubatsira iye kuita zvakawanda kwazvo muhupenyu. Zvinotofanira isu kurumbidza Mhuri yake yese nekumutsigira parwendo rwakaoma urwu. Chokwadi ndechekuti, ndidzo chikonzero nei asina kumbokanda mapfumo pazviroto zvake.
Ndatenda nekuverenga kwedu Hupenyu Hupenyu hweNgozi Okonjo-Iweala. Nomutsa taura nesu kana iwe ukaona chero chinhu chisina kukodzera nezvinyorwa zvedu. Zvikasadaro, ndokumbira utarise nekukurumidza iye Wiki mutafura iripazasi.
Zita rizere: Ngozi Okonjo-Iweala
Zita rekudanwa: Okonjo-Wahala
Nzvimbo yekuzvarirwa: Ogwashi-Ukwu, Delta State, Naijeriya.
Baba: Prof. Chukwuka Okonjo
Amai: Prof. Kamene Okonjo
Vanun'una: Dr Njide Okonjo-Udochi, Ifechukwude naOnyema Okonjo
Murume: Dr Ikemba Iweala
Vana: Uzodinma, Uchechi, Okechukwu naDr Onyinyechi Iweala
Net Worth: $ 5 mamirioni (2021 Stats)
Citizenship: Kuva Nenyika Dzevaviri (Nigeria neUnited States)